GreenKhabar – समृद्धि र विकासको २५ वर्षे योजना बनाउँदै एमाले
in मूलपेज — by GreenKhabar —	March 28, 2017
एमाले राष्ट्रिय हित–सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव, लोकतन्त्र र देशलाई समृद्धितर्फ लैजाने कुरामा दलीय स्वार्थको साँघुरो घेरामा कैद हुँदैन । देश विकासका लागि के–के योजना चाहिन्छ ? त्यसका लागि कुन क्षेत्रमा कति दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्दै जानुपर्छ, शिक्षाको योजना के हुनुपर्छ ? कृषिको आधुनिकीकरण, देशलाई आत्मनिर्भरताको बाटोमा लैजाने कुरामा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीदेखि सुशासनलगायत सबैमा स्पष्ट नीति र योजनासाथ एमाले अघि बढ्न चाहन्छ । अब नेपाल भूपरिवेष्टित या कुनै देश वेष्टित होइन, पारस्परिक सम्मान, सहकार्यसहित अघि बढ्न खोजिरहेको छ । चीनको वान बेल्ट वान रोडको अवधारणा हाम्रा लागि धेरै उपयोगी छ । आन्तरिक कनेक्टिभिटीसँगै संसारसँगको कनेक्टिभिटीमा रहेर बढ्न चाहन्छौँ ।नयापत्रीकाबाट